‘सेवा गर्न आएको हुँ !’ अपेक्षा अनुसार काम पुरा भएको छैन : वडाध्यक्ष राजु खड्का « Pariwartan Khabar
‘सेवा गर्न आएको हुँ !’ अपेक्षा अनुसार काम पुरा भएको छैन : वडाध्यक्ष राजु खड्का
१७ पुस २०७६, काठमाडौं
सामान्य परिवारमा जन्मिएर पनि सुखदसँग बाल्यकाल बिताएका वडाध्यक्ष हुन् राजु खड्का । राजधानी काठमाडौंमा घर भएका उनले सरकारी विद्यालय अध्ययन गर्दै आफ्नो बाल्यकाल बिताएको अनुभव सुनाए । विगतबाटै समाजसेवामा लागि परेका खड्कालाई बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ४ का वडावासीले सहजै वडाध्यक्षको रुपमा चुने । निर्वाचन पछि विकास निर्माणका धेरै कामहरु भएका छन्, तर हाल जनताको अपेक्षा अनुसारको काम भएको छैन, उनले भने, ‘विकास जादुको छडी जस्तो होईन, यसको आफ्नै प्रकृया छ ।’
सानैबाट समाजसेवामा लाग्न प्रेरित गर्ने माता साबु खड्का र पिता कृष्ण गोपाल खड्का उनको सफलतामा निकै खुसी छन् । २०३१ साल चैत्र २७ गते साविक विष्णु गाविस वडा नं ४ मा जन्मिएका उनमा आफ्नो मातृभुमी प्रति निकै स्नेह देखिन्छ । सानैबाट गाउँको विकास गर्न भोकाएका वडाध्यक्ष राजु खड्का हाल विकास निर्माणका काममा निकै अग्रसर छन् । घर नजिकै रहेको बूढानीलकण्ठ स्कुलबाट प्राथमिक शिक्षा शुरु गरेका उनले दरबार हाई स्कूलबाट एसएलसी उतिर्ण गरे ।
शिक्षालाई निरन्तरता दिंदै नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीक यात्रामा हुम्मिएका खड्काले १२ औं महाधिवेशनमा साविक विष्णु गाउँ विकास समिति इकाई पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी पाए । ०७१ सालमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिका भएपश्चात पुनः बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ४ पार्टी सभापति रहेर काम गर्ने अवसर प्राप्त हुदा थप उत्साहित बने । पार्टीको विस्वास र जनताको साथका कारण ०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ढुक्कसँग अध्यक्ष पदको टिकट लिन उनमा जोसिलो हिम्मत थियो । त्यसैको परिणाम बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ४ को वडाध्यक्षमा चुनिए ।
बूनपा ४ मा भएका दुई वटा सामुदायिक विद्यालय मदन आश्रीत आधारभूत विद्यालय र श्रीराम आधारभुत विद्यालयमा सहयोग गरेको बताउँदै वडाध्यक्ष खड्काले भने, खानेपानी देखि शौचालय सम्म नभएका विद्यालयलाई वडाले भौतिक सम्रचना निर्माण, खानेपानीको सुविधा, विद्युत र शौचालय बनाउने कार्य समेत गरेका छौं । त्यति मात्र नभएर सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरिय शिक्षाको लागि व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गरी लागि विद्यालयलाई आग्रह गरेका छौं ।
आफू वडाध्यक्ष चुनिनु अघि अव्यवस्थित रहेका साना–ठुला सडकहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन्, अध्यक्ष खड्काले भने, बूढानीलकण्ठ–चण्डेश्वरी सडक रिटेर्निङ वालसहित पक्की, घुम्ति–घट्टापाटी–चण्डेश्वरी ड्रेन सहित पिच, वडा कार्यालय–कपुर चोक हुँदै वडा नं. ६ लुडेखोलासम्मका सडक विस्तारका कार्यलाई उपत्यका विकास प्रधिकरणले सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी पञ्चकन्या बस्तिहुँदै बूढानीलकण्ठ जानेबाटो नगरस्तरिय बजेटबाट ५० लाखको टेण्डरमा गएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको पहलमा शिवमन्दिर–थापा गाउँ हुँदै बूढानीलण्ठ जाने सडक निर्माणको लागि ५० लाख विनियोजन भएको छ । सडक निर्माणको क्रममा आवस्यकता अनुसारको पुनः बजेट छुट्याउन समेत मन्त्री पोखरेल प्रतिवद्ध छन् । यतिमात्र नभएर वडाका संपुर्ण सडकहरु तिब्ररुपमा निर्माण गर्न पहल गर्न सधै तयार रहेको जनाए ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद मैदान
फुटबल खेल मैदान निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । केहि विवादित जग्गाको कारण काम रोकिएको छ उनले भने, यो समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ, आफ्नै कार्यकालमा फुटबल चौर हेर्ने ठुलो रहर छ ।
बूढानीलण्ठकै खानेपानी समस्या मुक्त वडा
बूढानीलकण्ठ नगरपलिका भित्रका संपुर्ण वडामा मुख्य समस्या भनेकै खानेपानी रहेको देखिन्छ । तर बूढानीलकण्ठको वडा नं ४ मा भने खानेपानीको खासै समस्या नहुनु वडावासीमा खुसीको कुरा हो ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ४ भित्रका १२ सय घरधुरीमा पानी सहितको धारा व्यवस्था गरिएको छ । निर्माणाधिन अवस्थाका घरहरुमा पानी पुर्याउन समेत वडाले केयुकेएलसँग सहकार्य गरेर सबै क्षेत्रका घरमा पानी सहितको धारा वितरण गर्न निकै सहज भएको छ । वडाभित्र खानेपानीको अभाव नहुनु र नयाँ घरधुरीलाई सहज रुपमा वितरण गर्न पाउनु खुशीको कुरा हो । वडाध्यक्ष खड्काले भने, म पुर्ण सन्तुष्ट छु ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण
वडा भित्रका धेरै जग्गाहरु जङ्गल तथा निकुञ्जसँग जोडिएका कारण निजी जग्गा सार्वजनिक जग्गासँग जोडिनु नौलो कुरा हैन । पुस्तौ–पुस्तादेखि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वडा नं ४ मा स्थानीहरुले सार्वजनिक जग्गा ओगटेका छन् । त्यस किसिमका जग्गालाई नगर तथा वडावासीको पहलमा संरक्षण गरी करिव २०० रोपनीमा चिडिया खाना जु बनाउने तयारीमा छु ।
चुनाव ताका जनतामाझ घोषणापत्रमा उल्लेखित विकास निर्माणका काम गर्न म आफैँ सचेत छु । वडावासीको हकहित संरक्षणका लागि सदैव अग्रसर रही बूढानीलकण्ठ वडा नं ४ लाई अन्य वडा भन्दा सुविधाजनक बनाउन म सधै लागि पर्नेछु । ‘यो मेरो मातृभूमी हो ।’
बूढानीलकण्ठ वडा नं ४
वडाध्यक्ष राजु खड्का